OnDoctor Editor, Author at OnDoctor | Page2of 233
ကျန်းမာသန်စွမ်း၍ ဉာဏ်ရည်ပြည့်ဝသော ကလေးများဖြစ်စေရန် သတိပြုဂရုစိုက်ရမည့်အရာများ
ယနေ့ခေတ်အခါ နည်းပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ လောကတစ်ခွင် စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိလာတဲ့အနက် မိမိကလေးများ ကျန်းမာသန်စွမ်းအောင် နဲ့ ဉာဏ်ရည်ပြည့်ဝအောင် ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ လေ့ကျင့်ပြုစုပျိုးထောင်ကြမလဲ? မိဘများအနေ နဲ့ မိမိရင်သွေးကလေးများအတွက် အန္တရာယ်ကင်းစေချင်တယ်။ ကျန်းမာစေချင်တယ်။ ပျော်ရွှင်စေချင်တယ်။ ဉာဏ်ပညာထက်မြက်စေချင်တယ်။ ဘက်စုံထူးချွန်စေချင်တယ်။...
ခန္ဓာကိုယ်မှာ အသည်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ။ ဘာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေလဲ။ ဘာတွေအရေးကြီးလဲဆိုရင် ၁။ ပထမဦးစွာ ဇီဝဖြစ်ပျက်ဆိုင်ရာ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းမှတဆင့် အစာ နဲ့ ဆေးဝါးများ အသည်းကိုဖြတ်ကာ ဘေးထွက်ပစ္စည်းများ၊ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း။ ၂။...
ကလေးငယ်လေးတွေကို ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေချင်တာ မေမေတို့ရဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးနေဆဲဖြစ်တဲ့ ငယ်စဥ်အရွယ် ကလေးငယ်တွေကို ထမင်းကျွေးရတာ တစ်ခါတစ်လေမှာ မေမေတို့အတွက် ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဆော့မက်တဲ့ကလေးတွေနဲ့ အစားကြေး(ဂျီး)များတဲ့ ကလေးတွေမှာဆို အစာစားအောင် တိုက်တွန်းရတာက...
လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ သွေးသည် သွေးနီဥဆဲလ် - Red blood cells၊ သွေးဖြူဥဆဲလ် - White blood cells၊ သွေးဥမွှားဆဲလ် - Platelets နှင့် သွေးရည်ကြည် - plasma တို့ဖြင့်...
DHA ဆိုတာ လူအများသိကြတဲ့ ငါးကြီးဆီထဲမှာပါတဲ့ Omega-3 fatty acid တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ Fish oil ထဲမှာဆိုရင် ပုံမှန်အားဖြင့် DHA (Decoxahexaeonic acid) နဲ့ EPA (Eicosapentatonic acid)...
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း (အထူးသဖြင့် ရင်ဘတ်၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် အောင့်ခြင်း) ဝေဒနာ ခံစားရခြင်းသည် အစာအိမ်အက်ဆစ်ဆန်တက်ခြင်း အကြောင်းရင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အစာအိမ်အက်ဆစ် ဆန်တက်ခြင်းကြောင့် ရင်ပူခြင်း သို့မဟုတ် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းနှင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း သို့မဟုတ်...
ယခုနှစ်တွေမှာ ကော်လဂျင်ဟာ အာဟာရဖြည့်စွက်စာအနေနဲ့ရော၊ အလှအပအရေးအရာအနေနဲ့ပါ လူအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ခံလာရပါတယ်။ ကော်လဂျင်ဟာ လူသားတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ အပေါများဆုံး ပရိုတိန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အဓိကအနေနဲ့ အရိုး၊ အရေပြားနဲ့ အရွတ်အကြောတို့မှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် သွေးကြော၊ မျက်ကြည်လွှာ၊...
ရှားစောင်းလက်ပပ်အနှစ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ ဘယ်မှာရှာရမလဲ။ သင့်အိမ်မှာ ရှားစောင်းလက်ပပ်ပင် ရှိရင် အသားထူတဲ့အပိုင်းကိုယူ၊ အဖျားမှာရှိတဲ့ ဆူးများကိုဓားဖြင့်ဖယ်ကာ အထဲမှာရှိတဲ့ ဂျယ်လ်ကို ဇွန်းနဲ့ယူပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။ အလုပ်ရှုပ်မခံချင်ရင် Aloe vera gel ဘူးလေးတွေ စျေးဝယ်စင်တာတွေမှာ...
ဆယ်ကျော်သက်များ ပိုမို၍အရပ်ရှည်လာစေနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါနည်းလမ်းများအတိုင်း နေထိုင်စားသောက်သင့်ပါသည်။ ( ၁ ) ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ရန်အတွက် နံနက်စာကို နေ့စဉ်ပုံမှန်စားသုံးပါ။ နံနက်စာကို နေ့စဉ်ပုံမှန်မပျက်မကွက် စားသောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည့် ကောင်းမွန်သော အလေ့အထတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။...
ကလေးများ ပုံမှန်အတိုင်းကောင်းစွာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရန် နှင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရန်အတွက် အာဟာရဓာတ်များ လုံလောက်မျှတစွာကျွေးမွေးခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အများအားဖြင့် မိခင်တို့အနေဖြင့် သားသားမီးမီးများအား အစားအစာများမှနေ၍ လိုအပ်သည့် ဗီတာမင်ဓာတ်များ၊ သတ္တုဓာတ်များ စသည့် အာဟာရဓာတ်များကို လုံလောက်စွာ...
Page2of 233 Prev 123 … 233 Next